कसरी गर्ने कोरोनाको चेनब्रेक ? - Nepal No 1 News - Bishwokhabr.com
कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमित १ हजार १ सयसम्म रहेको बागलुङमा बिहिबारसम्म आइपुग्दा ६ सयमा झरेको छ । सङक्रमितहरु डिस्चार्ज हुने क्रम बढेको छ । कोरोनाका बिरामी थपिने दर केही कम पनि भएको छ । तर गाउँ गाउँमा पुगेको कोरोनाको चेनब्रेक कसरी संभव होला ? यो अहिलेको बढी चासोको विषय बनेको छ ।
सक्रिय सङ्क्रमितलाई घरमा बस्न नदिई संस्थागत आइसोलेसनमा राख्ने, घरमा बसेकाले अनिवार्य मापदण्ड पालना गर्नेमा कडाइ गरिएको थापाको भनाई छ । आइसोलेसनमा पनि दैनिक उपचार सेवा दिएर सुरक्षित बनाएको उहाँको अनुभव छ । कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई व्यापक रुपमा बढाएकोले सफलता पाउन सकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्ती बताउनुहुन्छ । “चेनब्रेकका लागि घर घरमै बस्ने, स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र बिरामी भएमा तत्काल उपचारमा जाने हो”, थापाले भन्नुभयो, “परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्छ ।” परीक्षण बिनै सङ्क्रमित छैनन् भन्ने हो भने सफलता नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बसेकालाई स्थानीय आमा समूहले दैनिक अर्गानिक खाना खुवाएको स्थानीय भवीकला रोकाले बताउनुभयो । जौको सातु, सागपात र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित अन्य खाद्यान्न सङ्क्रमितलाई दिएकोले सहज भएको रोकाको अनुभव छ । सङ्क्रमणको पहिलो चरणमा यहाँकी एक जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएको थियो । घरमै रोग च्याप्दा सिकिस्त बनेकी वडा नं. ३ की सदस्य तेजुमाया भण्डारीको धौलागिरि अस्पताल लगेको तेस्रो दिन निधन भएपछि तर्सेका जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीले चौबिसै घण्टा खटिएर गाउँपालिकालाई शुन्य बनाउन सकेको बताउनुभयो ।